🥇 ဝန်ဆောင်မှုဘူတာများအတွက်အစီအစဉ်
အဆင့်သတ်မှတ်ချက်: 4.9. အဖွဲ့အစည်းအရေအတွက်: 751
၀ န်ဆောင်မှုဌာနကိုစီမံခန့်ခွဲရန်မှာမလွယ်ကူလှပါ။ အထူးသဖြင့် ၀ န်ဆောင်မှုဌာနသည်၎င်း၏လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ကိုတိုးချဲ့ရန်၊ ဖောက်သည်များအားမတူညီသော ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးကိုပေးသည့်အခါကွဲပြားခြားနားသောစီမံခန့်ခွဲမှု၊ ကားပြင်ဆင်မှုလုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်သို့မဟုတ်ဘူတာတွင်ပေးသောအခြားမည်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုမဆိုစာရွက်စာတမ်းများ။
ကားဝန်ဆောင်မှုဌာနမန်နေဂျာအများစုသည် ၀ န်ဆောင်မှုဌာန၏လုပ်ငန်းအသွားအလာကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်နှင့်အလွန်ပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်ဆောင်ရမည့်အလုပ်ပမာဏကိုလျှော့ချရန်ကူညီမည့်အစီအစဉ်တစ်ခုကိုရှာဖွေရန်ကြိုးစားနေခြင်းသည်အံ့အားသင့်စရာမဟုတ်ပါ။ စာရွက်ပေါ်တွင်ဖြစ်စေ MS Word သို့မဟုတ် Excel ကဲ့သို့သောစာရင်းကိုင်ဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖြင့်ဖြစ်စေကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ရမည်။ ထိုကဲ့သို့သောအစီအစဉ်ကိုရှာဖွေရန်မှာမလွယ်ကူပါ။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အလိုအလျောက်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်များအတွက်စျေးကွက်တွင်ရွေးချယ်နိုင်မှုသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်မြင့်မားသော်လည်းအရည်အသွေးသည်အလွန်ကွာခြားသဖြင့်၎င်းသည်လေးနက်သောပြissueနာဖြစ်လာသည်။ မည်သည့်လုပ်ငန်းရှင်မဆိုသူတို့စီးပွားရေးအတွက်အကောင်းဆုံးကိုသာလိုလားသည်။ နားလည်နိုင်သည်။ သင့်လျော်သောအလိုအလျောက်စနစ်မရှိဘဲ ၀ န်ထမ်းများအတွက်အချိန်နှင့်အရင်းအမြစ်များစွာကိုစွန့်လွှတ်စရာမလိုဘဲ ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကိုချဲ့ထွင်ရန်မဖြစ်နိုင်သဖြင့်စာရွက်စာတမ်းများစွာကိုလုပ်ဆောင်နိုင်လိမ့်မည်။ ထို့အပြင် - မည်သည့်ပရိုဂရမ်ကိုမဆိုအသုံးမပြုဘဲလက်ဖြင့်စာရွက်စာတမ်းများစီမံခန့်ခွဲမှုသည်အလွန်နှေးနှေးသောကြောင့်သုံးစွဲသူများကိုပိုမိုစောင့်ဆိုင်းစေသည် - ၎င်းသည်ဖောက်သည်များကြိုက်နှစ်သက်သည့်အရာမဟုတ်ပါ။ သူတို့သည်စာရွက်စာတမ်းများကို၎င်း၏အဓိကစာရင်းကိုင်နည်းလမ်းအဖြစ်အသုံးပြုဆဲဖြစ်သည့်အခြားမည်သည့်ဝန်ဆောင်မှုဌာနကိုမဆိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာထိရောက်စွာထမ်းဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အစောပိုင်းကကျွန်ုပ်တို့ကောက်ချက်ချခဲ့သည့်အတိုင်း၊ မည်သည့်အလိုအလျောက်ဆော့ဝဲလ်ကိုမှမသုံးဘဲစျေးကွက်၌ယှဉ်ပြိုင်မှုအနည်းငယ်ပြုလုပ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ၊ သို့သော်တစ်ခုကိုရွေးခြင်းသည်အလွန်ပင်ခက်ခဲသောအလုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘယ်မေးခွန်းကိုရွေးချယ်ရမလဲ။ အဘယျသို့ကောင်းသောစာရင်းကိုင်အစီအစဉ်တစ်ခုသို့မဟုတ်မကောင်းတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုအဖြစ်အရည်အချင်းပြည့်မှီ? ကျွန်ုပ်တို့ထိုကဲ့သို့သောဆော့ဖ်ဝဲကိုလိုအပ်သောအရာအားဖြင့်ဖျက်စီးကြပါစို့။
မည်သည့် service station မဆို၎င်း၏ဒေတာဘေ့စ်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်စီးဆင်းမှုများကိုလျင်မြန်စွာနှင့်ထိရောက်စွာခြေရာခံနိုင်မည့်အစီအစဉ်တစ်ခုလိုအပ်သည်။ မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမဆိုရှာဖွေနိုင်သည့်စွမ်းရည်သည်ဖောက်သည်၏အမည်၊ အလည်အပတ်ရောက်ရှိသည့်နေ့စွဲ၊ သူတို့၏ကားအမှတ်တံဆိပ်သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောမည်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုမျိုးကိုပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းသို့မဟုတ်ပြproblemနာရှိဖောက်သည်များနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ထိုကဲ့သို့သောပရိုဂရမ်သည်ဒေတာဘေ့စ်များနှင့်အလွန်မြန်ဆန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သင့်သည်၊ သို့သော်၎င်းကိုအောင်မြင်ရန်အဘယ်အရာလိုအပ်သနည်း။ ပထမအချက် - လေ့လာရန်နှင့်အသုံးပြုရန်အချိန်သိပ်မယူရဘဲရိုးရှင်း။ နားလည်လွယ်သောသုံးစွဲသူမျက်နှာပြင်ဖြစ်ပြီးဒုတိယတစ်ခုမှာပရိုဂရမ်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြုပြင်သင့်သည်။ ထို့ကြောင့်သူသည်လျင်မြန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ရန်နောက်ဆုံးပေါ်ကွန်ပျူတာစက်ပစ္စည်းကိုမလိုအပ်ပါ။ ဤအချက်နှစ်ချက်ကိုပေါင်းစပ်။ ကျွန်ုပ်တို့ဒေတာဘေ့စ်နှင့်ထိရောက်မြန်ဆန်သောအလုပ်ကိုရနိုင်သည်။
ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အစီအစဉ်သည် ၀ န်ဆောင်မှုဌာနမှနေ့စဉ်၊ လစဉ်သို့မဟုတ်နှစ်စဉ် အခြေခံ၍ ထုတ်ပေးသောဘဏ္dataာရေးအချက်အလက်အားလုံးကိုစုဆောင်းပြီးသတင်းပို့နိုင်ကြောင်းသေချာစေလိုပြီး၊ ထိုသို့သောအစီရင်ခံစာများမရှိပါက၎င်း၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကိုတွေ့မြင်ရန်မှာအလွန်မလွယ်ကူပါ။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှကုမ္ပဏီ၏တိုးတက်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။ ထိုကဲ့သို့သောသတင်းအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ဆင်ခြင်တုံတရားနှင့်သြဇာညောင်းသောစီးပွားရေးဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ခြင်းအပြင်ကုမ္ပဏီတွင်မည်သည့်အရာနှင့်အားနည်းချက်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ အကယ်၍ ရွေးချယ်သောစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်သည်၎င်းကိုတည်ဆောက်နေသည့်ဂရပ်များနှင့်အစီရင်ခံစာများကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းထုတ်ဖော်ပြသနိုင်လျှင်၎င်းသည်ရရှိရန်ပိုမိုကြီးမားသောအားသာချက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ လုပ်ငန်းရှင်များစွာသည်သူတို့၏ကုမ္ပဏီအတွက်မှန်ကန်သောဆော့ဝဲလ်ရွေးသည့်အခါစဉ်းစားစရာမဟုတ်ပါ။
ထိုအခါစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ကိုဖြည့်ဆည်းရမည့်နောက်ထပ်ကြီးမားသောလိုအပ်ချက်မှာ user interface ဖြစ်သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်ကြီးမားသောသဘောတူညီမှုတစ်ခုဟုမထင်ရသော်လည်းအမှန်မှာ၎င်းသည်အလုပ်အတွက်မှန်ကန်သောလျှောက်လွှာကိုရွေးချယ်ရာတွင်အကြီးမားဆုံးအချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။ စာရင်းကိုင်ပရိုဂရမ်ကောင်းတစ်ခုသည်ရိုးရှင်းလွယ်ကူစွာအသုံးပြုရန်လွယ်ကူပြီးနားလည်လွယ်သောမည်သူမည်ဝါ၊ မည်သည့်သူမဆို၊ စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ကွန်ပျူတာအသုံးချပရိုဂရမ်များနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲများတွင်အလုပ်အတွေ့အကြုံနည်းသူ၊ သို့မဟုတ်ယေဘုယျအားဖြင့်ကွန်ပျူတာများတွင်အတွေ့အကြုံမရှိသောသူများမည်သူမည်ဝါနားလည်မည်ကိုနားလည်နိုင်သည်။ နားလည်ရန်လွယ်ကူသော user interface တစ်ခုရှိခြင်းသည် ၀ န်ထမ်းများကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းတွင်အချိန်နှင့်အရင်းအမြစ်များကိုချွေတာရန်အရေးကြီးသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်မည်သည့်စီးပွားရေးအစီအစဉ်မဆိုအလွန်ကောင်းမွန်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့သည့်အရာအားလုံးကိုသုံးသပ်ပြီးနောက်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောအချက်များ - USU ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိုမှတ်သားထားပြီးဒီဇိုင်းပြုထားသောကျွန်ုပ်တို့၏အထူးဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖြေရှင်းနည်းကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အစီအစဉ်တွင်ယခင်ကဖော်ပြခဲ့သည့်အရာအားလုံးပါ ၀ င်သည်သာမကများစွာသောအရာများပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည်မည်သည့်ကားဝန်ဆောင်မှုဌာနကိုမဆိုကြီးမားသောအထောက်အကူဖြစ်လာလိမ့်မည်။
USU ဆော့ဝဲလ်၏အကူအညီဖြင့်တစ်ခုတည်း၊ စုစည်းထားသောဖောက်သည်များကိုဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။ သင်သည်မည်သည့်ဖောက်သည်ကိုမဆိုနှစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့်သူတို့၏အမည်၊ ကားနံပါတ်သို့မဟုတ်အခြားမတူညီသောအချက်များဖြင့်ရှာဖွေနိုင်သည်။ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအားလုံးကိုသတင်းအချက်အလက်များကိုအထူးဒေတာဘေ့စ်တစ်ခုတွင်သိမ်းဆည်းပြီး ၀ န်ဆောင်မှုဌာနများစွာကိုတစ်ချိန်တည်းစီမံနိုင်ရန်အင်တာနက်နှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ပရိုဂရမ်သည် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများအတွက်ဒေတာများကိုနောင်တွင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးနိုင်သည်။ အသံမက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခု၊ SMS တစ်ခုသို့မဟုတ် Viber ခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုပင်ပို့ခြင်းဖြင့် ၀ န်ဆောင်မှုကိုသတိရစေနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အစီအစဉ်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်၏ ၀ န်ထမ်းများအတွက်လုပ်အားခကိုတွက်ချက်ရန်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အချက်များများစွာရှိသည်။ တွက်ချက်မှုကိုလုပ်ဆောင်စဉ်၎င်းတို့လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်အလုပ်အမျိုးအစား၊ အလုပ်ချိန်တွင်အသုံးပြုခဲ့သောနာရီအရေအတွက်နှင့်အရည်အသွေး က။
ယနေ့ USU ဆော့ဝဲလ်ကို Download လုပ်၍ သင်၏စီးပွားရေးကိုလျင်မြန်စွာနှင့်အကျိုးရှိစွာအလိုအလျောက်စတင်ပါ။
ကားဝန်ဆောင်မှုစာရင်းကိုင် software ကို
ကားဝန်ဆောင်မှု software ကို
ကား ၀ န်ဆောင်မှုတွင်အလုပ်များကိုထိန်းချုပ်ခြင်း
ဖောက်သည်တစ် ဦး ကားဝန်ဆောင်မှုအတွက်စာရင်းကိုင်